Ukudalwa komlando wenkampani yeDelta Engineering
Funda kabanzi ngathi nange nkampani yethu
IDelta Engineering yasungulwa ngonyaka we-1992 nguDanny De Bruyn noRudy Lemeire, bobabili onjiniyela abasebenza ekwenziweni kwamabhodlela epulasitiki.
Ngokubona ukushoda kwemishini yokuthola ukuvuza okusebenzayo, baqala ukuklama nokukhiqiza i-UDK100, umhloli oyikhanda elilodwa.
Ezinyangeni naseminyakeni elandelayo, bahlala kakhulu bematanisa nezidingo zamakhasimende abo, okuholela ngokushesha ekwakhiweni kwezixazululo zonke zokuxazulula izinkinga zangempela zezinkampani zanamuhla.
Le ndlela yokunikeza amandla inike amandla i-Delta Engineering ukuthola isikhundla esiphambili embonini. Namuhla iDelta Engineering ibala amaqembu amakhulu ezizwe eziningi, kanye nezinkampani ezincane ezizimele phakathi kwamakhasimende ayo.
Sithuthukisa ukusebenza kwakho ngempumelelo
Uyala ikhwalithi yethu
Kungumsebenzi wethu ukuthuthukisa izixazululo ezidingekayo zokuvumela amakhasimende ethu ukuba azihlukanise nabanye. Inqubo yamakhasimende ethu, abasebenzi, impahla yokupakisha nezindleko zokuhamba ingeye-KPI yethu lapho kuklanywa imishini nezisombululo ezintsha.
Silubona kanjani uhla lomkhiqizo wethu? Ngokusebenzisana eduze nawe, ikhasimende lethu: impendulo yakho ebucayi isivumela ukuthi siguqule futhi sithuthukise imikhiqizo yethu. Isici esibalulekile empumelelweni yethu: abantu abakwibhizinisi lethu namandla abo okudala. Umgomo wethu ukufeza ukwaneliseka kwamakhasimende ngokusebenzisa ubuhle ekuklameni izixazululo ezisezingeni eliphakeme, ezingabizi, zokwakha, zokufaka nangemva kokuthengisa okuphezulu. Ngokusebenzisa amasiko ethu, ukuqhuba kanye nobuchwepheshe besisebenzi ngasinye, sikulungele ukuhlangana nezidingo zamakhasimende ethu emhlabeni jikelele.